Ciidamada dowlada oo howlgal gaadmo ah ku dilay Dagaalyahano katirsan Al Shabaab | Allbanaadir.com
Home NEWS Ciidamada dowlada oo howlgal gaadmo ah ku dilay Dagaalyahano katirsan Al Shabaab
Ciidamada dowlada oo howlgal gaadmo ah ku dilay Dagaalyahano katirsan Al Shabaab
Ciidanka milatariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 14-ka oktoobar ayaa howlgal qorsheesan ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga Deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku dileen xubno katirsan Al Shabaab.
Saraakiisha ciidanka miltariga ayaa sheegay in howlgal gaadmo ah ay ka fuliyeen tuulooyinka Busleey iyo Buulo Aluundi halkaas oo ay sheegeen in ay ku dhuumaaleesanayeen dagaalyahano katirsan Al Shabaab.
Ciidamada milatariga ayaana sheegay in howlgalka ku dileen 7-dagaalyahan oo katirsan kooxda Al Shabaab , waxa ayna saraakiisha ciidanka sheegeen in xubnahan la dilay ay isku dayeen in ay ka baxsadaan ciidamada .
Saraakiidsha ciidanka xooga Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay sii wadayaan howlgalada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab ee ku sugan deegaano katirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka Janaale .
Previous articleAl Shabaab oo soo bandhigtay Sargaal ciidan oo isku soo dhiibay
Next articleQatar oo marti-gelinayso Shir Degdeg ah oo looga arrinsanayo Biyo-xireenka Ethiopia